ဖေဖော်ဝါရီ လ ပွဲမတိုင်ခင် အနည်းငယ် ကြိုတင် ပြသခဲ့တဲ့ 2022 Nissan Pathfinder နဲ့ Frontier ! – MyMedia Myanmar
ဖေဖော်ဝါရီ လ ပွဲမတိုင်ခင် အနည်းငယ် ကြိုတင် ပြသခဲ့တဲ့ 2022 Nissan Pathfinder နဲ့ Frontier !
Nissan ကုမ္ပဏီ ကတော့ အဓိက ကားမော်ဒယ် ၂ ခုရဲ့ ပွဲဦးထွက် မတိုင်မီပဲ Teaser Site အသစ် တစ်ခု ကိုတော့ ထုတ်ပြခဲ့ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီဘက်ကတော့ အဆိုပါ ကားအသစ်တွေနဲ့ ပက်သက်ပြီး အသေးစိတ် မပြောကြား သေးပေမယ့် သေချာနေတာကတော့ အဆို ပါ ကားတွေ ဟာ မျိုးဆက် သစ် Pathfinder Crossover နဲ့ Frontier Pickup အမျိုးအစားတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ ကား နှစ်မျိုးလုံး ကိုတော့ လာမယ့် ဖေဖော်ဝါရီ လ ၄ ရက် နေ့ EST 1:00 PM မှာ စတင် မိတ်ဆက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တမ်းမှာတော့ အခု Teaser Site အသစ်မှာ ဘာမှ ရေရေရာရာ ပြောကြား ထားခြင်း မရှိပေမယ့်လို့ Spy Shots နဲ့ Rumors တွေ အရ ကတော့ အခု ကား အသစ်တွေအကြောင်း အနည်းငယ် သိထားရပါတယ်။ အခုအချိန်ထိတော့ Nissan အနေနဲ့ Pathfinder ရဲ့တိုးတက်မှု အနေအထား တွေကို Camouflage တွေ အပြည့်အဝ အုပ်ထားပြီးတော့ကို လျှို့ဝှက်ထားဆဲ အဆင့်မှာ ပဲ ရှိပါသေးတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း ထွက်ပေါ်ထားတဲ့ တစ်ချို့သော Rendering တွေအရ ကားရဲ့ပုံစံကို ခန့်မှန်းလို့ရတဲ့ အနေအထားပါပဲ။ ကားရဲ့ အရှေ့ ဘက်မှာ မတူညီတဲ့ အသွင်သစ် ကိုမြင်ရလာနိုင်ပြီး ယခင်တုန်းက ပြန်လည်ဆန်းသစ်ထားတဲ့ Armada နဲ့လည်း ခပ်ဆင်ဆင် ဖြစ် လာနိုင်ကာ Bracket ပုံစံ Running Lights တွေ အပြင် ပိုပြီး ထူထူထဲထဲ ရှိလှတဲ့ V-Section ပုံစံ ကိုလည်း Grille ထဲမှာ မြင်တွေ့ ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Overhaul ဖြစ်တဲ့ ကားရဲ့ အတွင်းခန်းထဲမှာ ဆိုရင်တော့ယခင် ကထက် ပိုကြီးမားတဲ့ Infotainment Screen ကို အောက်နားမှာ Buttons တစ်ချို့နဲ့ အတူ တွဲဖက်မြင်တွေ့ရနိုင်ပြီး Center Console အပိုင်းကတော့ Shift-By-Wire Gearshift နဲ့ ပေါင်းစပ်လာနိုင်ဖို့မျာပြီး လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သုံး Parking Brake ကိုလည်း တပ်ဆင် ပေးထားနိုင်ပါတယ်။ အခု Pathfinder အသစ် မှာ ဆိုရင်တော့ သူ့ရဲ့ Platform ကို ယခင် Altima နဲ့ Maxima တို့ နဲ့ အတူတူပဲ တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်ပေးလာမှာ ဖြစ်ပြီး Nine-Speed Automatic Gearbox ကိုလည်း တပ်ဆင် ပေးလာမှာဖြစ်ကာ လက်ရှိ မော်ဒယ် အဟောင်းမှာ ရှိနေတဲ့ CVT ကိုလည်း အစားထိုး ပေးလာနိုင်ပါတယ်။ ကားရဲ့ အင်ဂျင် ပိုင်းမှာတော့ Crossover ဟာ 2.0 Liter Turbocharged Variable Compression Engine ကို ထည့်သွင်းပေးလာမှာ ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ အင်ဂျင်ကလည်း Altima ဆီကနေ ယူဆောင်လာမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တောင်အမေရိက ဈေးကွက် အတွက် Navara Pickup ကားကို ထုတ်ဖော်ပြသနေစဉ် အတွင်းမှာပဲ ကုမ္ပဏီ အနေနဲ့ ‌ဖော်ပြထားတဲ့ Frontier အသစ် ကိုပါ ချပြလာနိုင်တာ ဖြစ်ကာ အဆိုပါ ကားကတော့ Titan နဲ့ Navara တို့ အကြားက Truck ကား တစ်စီး ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ အခု မြင်တွေ့ရတဲ့ ပုံရိပ်တွေကသာ မှန်ကန်တိကျမယ်ဆိုပါက Frontier အသစ်ဟာ ပိုပြီး ထူထည် ကြီးကြီးမားမား မျက်နှာစာနဲ့ ဖြစ်လာဖို့ များနေပြီး လေးထောင့်ကျတဲ့ Headlights တွေနဲ့ ထူထဲတဲ့ Grille တွေလည်း ပါဝင်လာနိုင်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် Fog Lights တွေမှာတောင်မှ ယခင် နဲ့ မတူပဲ သေးငယ်တဲ့ လေးထောင့် စပ်စပ် ပုံစံ ကို အသုံး ပြုလာနိုင်ကာ ယခင် က ထက် ပိုပြီး အကြမ်းခံတယ် ဆိုတဲ့ အသွင်ကို ပြ‌သရာလည်း ရောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Frontier ရဲ့ Cabin အခန်းတွင်းထဲကို မြင်တွေ့ ရသလောက် Spy Shots တွေ အရတော့ Infotainment System အသစ် ပါဝင်လာမှာ သေချာသလောက် ရှိနေပြီး Four-Wheel Drive စနစ် အတွက် Controller ကိုလည်း အလယ်ပိုင်းမှာ ထည့်သွင်း ပေးလာနိုင်ကာ2WD ၊4WD Hi နဲ့4WD Low Settings တွေအဖြစ် ကောင်းကောင်း ချိန်ညှိနိုင်မှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကားရဲ့ အင်ဂျင်ပိုင်း မှာတော့ 2020 တုန်းက ကားမှာ ဆိုရင် 3.8 Liter V6ကို တပ်ဆင်ထားပြီး လက်ရှိမှာ တော့ 310 hp ( 231 kW ) နဲ့ 281 lb-ft Torque ( 381 Nm ) အထိ စွမ်းဆောင် ထား နိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အခု လက်ရှိ ကားမှာကတည်းက Nine-Speed Automatic စနစ်နဲ့ ပါဝင်ထားတာကြောင့် ကား အမျိုး အစား အသစ်နဲ့ ပက်သက်ပြီး စိတ်လှုပ်ရှား စရာတော့ ကောင်းလို့နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
The post ဖေဖော်ဝါရီ လ ပွဲမတိုင်ခင် အနည်းငယ် ကြိုတင် ပြသခဲ့တဲ့ 2022 Nissan Pathfinder နဲ့ Frontier ! appeared first on MyCars Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-01-21T18:30:50+06:30January 21st, 2021|MYCARS MYANMAR|